Madaxweynaha DFS oo ka tacsiyeeyey geerida Wariye Cabdi Xaaji Gobdoon
January 26, 2016 - Written by Editor
Muqdisho:-Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi u diray qoyskii, eheladii iyo shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Allaha u naxariistee Marxuum Cabdi Xaaji Gobdon oo ahaa La Taliyaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha dhanka arrimaha warfaafinta. “Inna Lillahi wa inaa Ileyhi Raajicuun. Allah u naxariisto marxuumka. Waxaa uu naftiisa iyo waqtigiisa u huray inuu u shaqeeyo ummaddiisa ilaa ay geerida uga timaaddo. Waxaa uu ahaa hawlkar waddankiisa wax badan u qabtey, taariikduna ay xusi doonto. Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu naxariistii Jannatul Fardowsa ka waraabiyo, qoyskii iyo eheladii uu ka tegeyna samir iyo iimaan ka siiyo’’, ayuu yiri Madaxweynaha.